Ogeysiiska Sharciga iyo Xaaladaha Isticmaalka ▷ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Ogeysiis sharci ah iyo shuruudaha isticmaalka
Dukumiintiga ayaa dib loo eegay 25 / 03 / 2018
Haddii aad halkan timid, waa inaad ka taxaddartaa qolka dambe ee websaydhkan iyo shuruudaha aan doortay inaan kula macaamilo taasna waa war weyn aniga ahaan, aniga oo mas'uul ka ah websaydhkan.
Sababta qoraalkan ayaa ah in si faahfaahsan loo sharxo howlihiisa websaydhka oo lagu siiyo dhammaan macluumaadka la xiriira qofka mas'uulka ka ah iyo ujeeddada waxyaabaha ku jira.
Xogtaada iyo asturnaantaada ayaa ahmiyad weyn u leh degelkan waana sababta aan kugula talinayo inaad adiguba akhrido Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Aqoonsiga Mas'uulka ah
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ogaatid cidda mas'uul ka ah websaydhkan. Ayadoo la raacayo Sharciga 34/2002, ee Luulyo 11, adeegyada bulshada macluumaadka ganacsiga iyo ganacsiga elektiroonigga ah, waxay kugu wargelinaysaa:
• Magaca shirkaddu waa: Online SL
• Hawlaha bulshada waa: Shabakad ku takhasustay dhowr edbinta suuqgeynta internetka.
• Bixi waxyaabaha laxiriira firfircoonida Suuqgeynta internetka.
• Maaree liistada macaamiisha bogga iyo faallooyinka dhexdhexaad ah.
• Maaree waxyaabaha ku jira iyo faallooyinka adeegyada la bixiyo.
• Maaree shabakada kuwa xiriirka la leh.
• Adeegyada gaarka ah iyo kuwa saddexaad.
Isticmaalka boggaga shabakadda.Faa'iidada waxay isticmaaleysaa inaysan fulinin dhaqan kasta oo dhaawici kara sumcadda, danaha iyo xuquuqda raacayaasha.wareegyada saddexaad ama waxyeeli kara, curyaami kara ama culeyska ka qaadi kara kuwa raacsan shabakadda. internetka ama taasi waxay ka hortegi kartaa, si kasta, isticmaalka caadiga ah ee shabakadda.
raac.online waxay qaadataa talaabooyin nabadgelyo oo macquul ah oo lagu ogaanayo jiritaanka fayras. Si kastaba ha noqotee, Adeegsaduhu waa inuu ogaadaa in tallaabooyinka amniga ee nidaamyada kombiyuutarka ee internetka aaney ahayn kuwo la isku halleyn karo oo sidaas darteed, raacayaasha.Guushuhu ma dammaanad qaadi karaan maqnaanshaha fayraska ama waxyaabaha kale ee wax u beddeli kara nidaamyada kombiyuutarka. (softiweer iyo qalab) Adeegga ama dukumiintiyadooda elektiroonigga ah iyo faylalka ku dhex jira.
Sikastaba, waa mamnuuc in USERS (awood u yeesho inuu tirtiro waxa ku jira iyo faallooyinka ay u aragto inay munaasib tahay) inuu sameeyo anshaxyo ay ku jiraan:
Kaydinta, daabacaadda iyo / ama gudbinta xogta, qoraalada, sawirrada, faylasha, xiriirada, softiweeriyada ama waxyaabaha kale ee diidmo leh ee ku saleysan qodobbada sharciga ee la adeegsan karo, ama in sida ku xusan qiyaasta raaciyaha.eegga sharci-darrada ah, rabshad, hanjabaad, aflagaado, sumcad-darro, akhlaaq xumo, fisqi, cunsuri, cunsurinimo ama diidmo ama haddii kale sharci darro ama waxay u horseedi kartaa waxyeelo nooc kasta ha ahaadee, gaar ahaan qaawan.
Isticmaal ahaan, waxaa lagugu wargaliyay in marin u helka degelkan uusan ka turjumeynin, sinaba, bilowga xiriirka ganacsi ee khadka tooska ah ee SL SL qaabkan, isticmaaluhu wuxuu ogolaaday inuu adeegsado websaydhka, adeegyadiisa iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay isagoon ku xadgudbin sharciga. hadda, iimaanka wanaagsan iyo kala dambaynta bulshada. Isticmaalka websaydhka ujeeddooyin sharci darro ah ama waxyeelo leh, ama in, si kasta oo ay tahayba, ay u geysan karto waxyeello ama u horjoogsato howlaha caadiga ah ee bogga waa mamnuuc.
Ku saabsan waxyaabaha ka kooban boggan internetka, waa mamnuuc:
• Soo-saaritaankooda, qaybinta ama wax ka badalkooda, gebi ahaan ama qeyb, ilaa ay u fasaxaan milkiilayaashooda xaqa u leh;
• Xad gudub kasta oo ku saabsan xuquuqda adeeg bixiyaha ama milkiilayaasha sharciga ah;
• U isticmaalkeeda ujeedooyin ganacsi ama xayeysiis.
Ilaalinta Xogta iyo Siyaasada Sirta
Online SL waxay damaanad qaadeysaa sir ahaanta macluumaadka shaqsiyeed ee ay bixiyeen USERS iyo daaweyntooda iyadoo la raacayo sharciga hada jira ee ilaalinta macluumaadka shakhsiga ah, iyagoo qaatay heerarka amniga ee sharci ahaan looga baahan yahay ilaalinta macluumaadka shaqsiyeed
Online-ka SL wuxuu ballan qaadayaa inuu adeegsado xogta ku jirta feylka "WEB Users AND SUBSCRIBERS", inuu ixtiraamo sirtooda isla markaana u adeegsado si waafaqsan ujeedada laga leeyahay, iyo sidoo kale inuu u hoggaansamo waajibaadkooda badbaadinta iyo la qabsiga dhammaan tallaabooyinka si looga fogaado wax ka beddelka, luminta, daaweynta ama marin la'aanta rukhsadda, iyadoo la raacayo qodobbada Xeerka Boqortooyada ee 1720/2007 ee Diisambar 21, kaas oo oggolaanaya Xeerarka horumarinta Sharciga Dhaqanka 15/1999 ee Diseembar 13, Ilaalinta Xogta Shakhsiyeed.
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa nidaamyo kala duwan oo loogu talagalay soo qabashada macluumaadka shakhsiyeed ee lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo halka isticmaalka iyo ujeedooyinka looga warbixinayo si faahfaahsan. Websaydhkani wuxuu had iyo jeer u baahan yahay oggolaanshaha hore ee isticmaalayaasha si uu uga baaraandego xogtooda shaqsiyadeed ujeedooyinka la tilmaamay.
Isticmaaluhu wuu jimicsi karaa, iyadoo la tixraacayo xogta la soo ururiyay, xuquuqda lagu aqoonsaday Sharciga Dhaqanka ee 15/1999, ee marin u helista, hagaajinta ama tirtirka xogta iyo mucaaradka. Si loo adeegsado xuquuqdan, isticmaaluhu waa inuu sameeyaa codsi qoraal ah oo saxeexan oo ay u diri karaan, oo ay la socdaan nuqul ka mid ah aqoonsigooda ama dukumenti aqoonsi oo u dhigma, cinwaanka boostada ee Online SL ama iimayl, ku lifaaqan nuqul ka mid ah Aqoonsiga ah: info (at) raacsan.online. 10 maalmood kahor codsigana waa laga jawaabayaa si loo xaqiijiyo fulinta xuquuqda aad codsatay inaad fuliso.
Online-ka SL wuxuu ogeysiinayaa inay jiraan foomam cabasho oo ay heli karaan dadka isticmaala iyo macaamiisha.
Adeegsaduhu wuxuu sameyn karaa sheegasho asaga oo codsanaya xaanshigiisa sheegashada ama emayl u diro macluumaadka (at) ተከታkiisa.online oo muujineysa magacaaga iyo magacaaga, adeegga ama badeecada la iibsaday iyo sheegida sababaha dalabkaaga.
Waxaad sidoo kale ku amri kartaa dalabkaaga boostada: Online SL, adigoo adeegsanaya, haddii aad rabto, foomka dalabka ee soo socda:
Loogu talagalay dareenka: Online SL
E-mayl: macluumaad (at) raacsan.online
• Magaca Isticmaalaha:
• Cinwaanka isticmaalaha:
• Saxiixa isticmaale (kaliya haddii warqad lagu soo bandhigo):
• Sababta sheegashada:
Iyadoo la adeegsanayo Xaaladahan Guud, looma ogola xuquuqda aqooneed ama midda warshadeed intarnetka kuwa raacsan. Khadka tooska ah ee hantidooda aqooneed ay leedahay Online SL, taranka, beddelka, qaybinta, wada xiriirka dadweynaha, u soo bandhigida dadweynaha, soo saarista ayaa si cad looga mamnuucay Isticmaalaha , dib u isticmaal, gudbin ama adeegsi nooc kasta ah, qaab kasta ama habraac, midkoodna, marka laga reebo kiisaska ay sharci ahaan u oggol yihiin ama u oggolaanayo qofka haysta xuquuqda u dhiganta.
Adeeggu wuu ogyahay oo aqbalayaa in bogga internetka oo dhan, oo ay ku jiraan xadid la'aan qoraalka, softiweerka, waxyaabaha ku jira (oo ay ku jiraan qaab dhismeedka, xulashada, qabanqaabada iyo soo bandhigida isla midka) sawirada, qalabka maqalka iyo cuntada, waxaa ilaaliya calaamadaha ganacsiga, xuquuqda daabacaada iyo xuquuqaha kale ee sharciga ah ee la diiwaangeliyay, iyada oo la raacayo heshiisyada caalamiga ah ee Isbaanishku yahay xisbi iyo xuquuqaha kale ee hantida iyo sharciga Spain.
Haddii ay dhacdo in isticmaale ama qof saddexaad u arko inuu jiray ku xadgudub xuquuqdooda aqooneed ee sharciyeed sababo la xiriira hordhaca waxyaabaha qaarkood ee Shabakadda, waa inay ku wargeliyaan Online SL xaaladda la sheegay ee tilmaamaysa:
Muuji waxa ku jira ilaalinta xuquuqda hantida aqooneed iyo halka ay ku taal Websaydhka, aqoonsiga xuquuqda hantida aqooneed ee la muujiyey iyo caddeyn cad oo ay xiiseynayaan cidda danayneysa inay mas'uul ka tahay hufnaanta macluumaadka lagu bixiyay ogeysiiska.
Online SL waxay diideysaa mas'uuliyad kasta oo laxiriirta macluumaadka laga helay banaanka degelkan, maaddaama hawsha xiriiriyeyaasha muuqda ay kaliya ku wargelinayaan Isticmaalaha jiritaanka ilo kale oo macluumaad ah oo ku saabsan mowduuc gaar ah. Khadka tooska ah ee loo yaqaan 'SL' ayaa laga saaray dhammaan mas'uuliyadda saxda ah ee ku shaqeynta isku xirnaanta noocaas ah, natiijada laga helay isku xirnaanta la sheegay, run ahaanta iyo sharcinimada waxyaabaha ama macluumaadka la heli karo, iyo sidoo kale waxyeelada laga soo sheegayo Isticmaalaha iyadoo la adeegsanayo macluumaadka laga helo websaydhka ku xiran.
Khadka tooska ah ee SL ma bixiyo wax dammaanad ah mana ka masuul tahay, xaalad kasta ha noqotee, waxyeellooyinka noocee ah oo ay sababi karaan:
• La'aanta helitaanka, dayactirka iyo howlgalka wax ku oolka ah ee websaydhka ama adeegyadeeda iyo waxyaabaha ku jira;
• Jiritaanka fayras, barnaamijyo xaasidnimo ama waxyeello leh waxyaabaha ku jira;
• Si cad, dayacaad, khayaano ah ama ka hor imanaya Ogeysiiskan Sharciga ah;
• Jiritaan la'aanta sharci, tayada, isku halaynta, faa iidada iyo helitaanka adeegyada ay bixinayaan dhinac saddexaad oo ay u suurto geliyeen isticmaaleyaasha websaydhka.
Bixiyuhu mas'uul kama ahan wax xaalad kasta oo dhaawac ah oo ka imaan kara sharci darrada ama si qaldan u isticmaalida websaydhkan.
Guud ahaan, xiriirka ka dhexeeya kuwa raacsan.online-ka ee ay la adeegsadaan adeegsadayaasheeda telematic, oo laga helo websaydhkan, waxay ku xiran yihiin sharciga Isbaanishka iyo awooda iyo maxkamadaha Granada.
Haddii ay dhacdo in Isticmaale kasta uu qabo wax su'aalo ah oo ku saabsan ogeysiiskan sharciga ah ama wixii ra'yi ah ee ku saabsan websaydhka websaydhka ah waxaad kala xiriiri kartaa macluumaadka (at) ተከታkooda.e.online
raac.online waxay xaq u leedahay dib u habeyn, waqti kasta iyo ogeysiis la'aan, soo bandhigida iyo qaabeynta websaydhada shabakada.wax ogaysiiskan sharciga ah.